Muuri News Network » Dowladda Itoobiya oo gogol nabadeed u dhigtay Jabuuti & Eritrea
Dowladda Itoobiya oo gogol nabadeed u dhigtay Jabuuti & Eritrea
Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa shaacisay in ay codsi u dirtay dalalka Jabuuti iyo Eritrea si ay u xaliso Muranka dhinaca dhulka ah ee u dhaxeeya labada dal.
Afhayeenka Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, Meles Alem, ayaa xaqiijiyay in warqado codsi ah ay u direen labada dal, si dowladda Itoobiya u dhamayso khilaafka dhinaca Soohdinta ah ee labada dal u dhaxeeya.
Dowladda Jabuuti ayaa dhawaan Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay weydiisatay in arrinta u dhaxeeya iyada iyo Eritrea wada hadal lagu dhameeyo islamarkaana Eritrea lagu qanciyo in ay ka baxdo dhulka Jabuuti sidoo kalena sii deyso maxaabiista dagaal ee Reer Jabuuti.
Dowladda Eritrea ayaa waxaa saaran cunaqabateyn 9 Sano ah oo ka dhalatay doorka Eritrea ee jebinta xeerarka Caalamiga ah ee ay ugu horreyso sheegashada dhulka Jabuuti iyo taageerada Argagixisada gudaha Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ma sheegin in Labada dal ay ka aqbaleen marti qaadka iyo gogosha nabadeed ee ay ku dooneyso in ay ku xalliso labada dal.
Dowladda Jabuuti ayaa dhawaan ka carootay baaq dowladda Soomaaliya ka soo baxay oo sheegayay in cunaqabateynta laga qaado Dowladda Eritrea